पत्रपत्रिकाको खबर Archives - Page3of 50 - www.kchhakhabar.com
आफ्नो श्रीमानले अरु कुनै महिलासँग यौन सम्बन्ध गाँसेको कुनचाहिँ महिलालाई सैह्य होला ? एकजना महिलाले यस्तै रिसको झोंकमा आफ्नो लोग्नेको यौनांग छिनालेर ट्वाइलेटमा बगाइदिएकी छन् । छिमेकी देश भारतको जालन्धरस्थित जोगिन्दर सहरमा बस्ने आजाद सिंह नामक पुरुष यस्ता अभागी सावित भए, जसको लिंग उनकै पत्नीले छिनाइन् । उनी अहिले ठुटो यौनांग सहित गम्भीर अवस्थामा स्थानीय अस्पतालमा उपचाररत छन् । लोग्नेको लिंग छिनाल...
९ फागुन, काठमाडौं । गुन्डा नाइके मनोज पुनसहित दुई जना प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका छन् । रुपन्देहीको देवदहमा पुनसँगै उनका सहयोगी सोम आले पनि मारिएका छन् । सोम आले मनोज पुनका सहयोगी हुन् । एसएसपी दीपक थापाका अनुसार उनीहरु नेपाल आएको सीआईबी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले पत्ता लगाएपछि सर्च अभियान चलाएको थियो । सोक्रममा देवदह नगरपालिका ४ भवानीपुरमा प्रहरीसँग जम्काभेट भएको थियो । त्यसपछि पक्राउ गर्ने ...
काठमाडौं / गोरखाको मान्बुस्थित भवानी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीलाई शिक्षकले मरणासन्न हुने गरी कुटेका छन् । विद्यालयमा अनुपस्थित भएको निहुँमा ७ कक्षा पढ्ने १४ वर्षीय सुपारे कार्की पिटिएका हुन् । पिटाइबाट उनको औँला सुन्निएको र रगत जम्ने अवस्थामा पुगेपछि अप्रेसन गरिएको छ । कार्कीलाई शिक्षक भरतमणि तिमल्सिनाले ढाडमा लठीले कुटेको र तेस्रोपटकमा रोक्न खोज्दा हातको आैँलामा लागेर ...
काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता र सरकार विस्तार प्याकेजमै टुंग्याउने गरी छलफल केन्द्रित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शनिबार भएको छलफलपछि दुवै विषयलाई प्याकेजमै टुंग्याउने समझदारी भएको हो । छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको दुवै पक्षका नेताहरूको दाबी छ । ‘एकता र सरकार गठन टुंगो लगाउने गरी सकारात्मक दिशामा छलफल अघि...
मोरङ । प्रदेश नं १ एमाले संसदीय दलमा सहमति जुट्न नसक्दा चुनाव नै हुने भएको छ । भीम आचार्य र शेरधन राईबीच सहमति जुट्न नसकेपछि आज शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि बिराटनगरमा निर्वाचन हुने छ । दलका नेताका लागी जिवन घिमिरेले समेत दाबी गरेपनि उनी अन्तिममा पछि हटने जनाईएको छ । संस्दीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने भएका कारण दुबे नेताले आफनो दाबी नछोडदा चुनाब नै हुने अबस्था सिर्जना भएको हो । ९३ सदस्यीय प...
भूत आतंक फैलाउनेलाई कारबाही, को-को परे प्रहरी फन्दामा ?
बैंकको ऋण तिर्न नसकेको बाहाना पार्ने भुत मान्छे लाई कारबाही गर काठमाडौँ, २४ माघ । ललितपुरको टिकाथलीमा भूतको आतंक मच्चाउनेमाथि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भुत काण्ड’मा संलग्न रहेका अञ्जना उपाध्याय र ललिता चौधरीलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर प्रहरीले घटनाबारे बयान लिएको हो । उनीहरुसँग बयान लिने क्रम जारी रहेको सातदोबाटो प्रहरी वृत्तले जनाएको छ । घटनामा संलग्न रहेका र उनीहरुका परिव...
एमाले माओवादीबीच ७०/३० को भागवण्डा, प्रदेशमा बढीमा ११ मन्त्री
काठमाडौं । वाम गठबन्धनले प्रदेश सरकारमा बढीमा ११ मन्त्री मात्र बनाउने सहमति गरेको छ । साथै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आफ्नो सरकार बन्ने प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा ७०/३० को भागवण्डा हुने भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच चार घन्टा छलफल भए लगतै कार्यदलले प्रदेशको प्रमुख दलहरको भागवण्डा टुंगो लगाएको छ । एमालेले चार मुख्यमन्त्री र चार सभामुख लिएको छ भने माओवादीले दुई म...
रौतहट चन्द्रपुरस्थित सन्तपुरमा रहेको दलित बस्तीका विपन्न समुदाय नयाँ घर निर्माणपछि गाउँ स्वर्ग बनेको भन्दै खुसी भएका छन् । छाप्रोमा बस्दै आएका विपन्न समुदाय धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले गाउँको स्वरुप परिवर्तन गरेपछि खुसी भएका हुन् । बर्ष, घाम तथा हावा नेछेक्ने छाप्रामा बस्दै आएका दलितले घर निर्माणको अगुवाई गर्ने हास्यकलाकार धुर्मुस (सीताराम कट्टेल) लाई भगवान भन्न थालेका छन् । आजको नागरिक दैनिकम...
गोर्खाल्याण्डका नेता थलुङ काठमाडौंबाट बेपत्ता
१२ माघ, काठमाडौं । आसम हतियार काण्डमा मुछिएका गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेस (जीटीए) सभा सदस्य सञ्जय थुलुङ काठमाडौंबाट ‘अपहरण’ मा परेका छन् । दार्जिलिङबाट फरार रहेका उनी केही महिनायता काठमाडौंमा बस्दै आएका थिए । गत मंगलबार काठमाडौंको धापासीस्थित आफन्तको घरमा आएपछि उनलाई एक अज्ञात समूहले नियन्त्रणमा लिएको हो । आफन्त प्रकाशचन्द्र मुखियाले थुलुङ बेपत्ता भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त, मह...
वृद्धभत्ताको राजनीतिः एमाले र कांग्रेस दुबैलाई निल्नु न ओकल्नु
१२ माघ, काठमाडौं । ६५ वर्षमै बृद्धभत्ता दिने सरकारी निर्णयपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन् कि सरकार देशलाई कंगाल बनाउन र अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्न उद्दत छ । देशको अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने गरी कामचलाऊ सरकारले गरेको निर्णय गैरजिम्मेवारपूर्ण काम नै हो । तर, वृद्धभत्ताको गलत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले कांग्रेसलाई मात्रै होइन, एमालेलाई सताउने देखिन्छ । आम चुनावमा...